Former Zimbabwe longtime leader Robert Mugabe dead at 95 - 360Africa.news - African News, Politics, & Culture
Home Politics Former Zimbabwe longtime leader Robert Mugabe dead at 95
Former Zimbabwe longtime leader Robert Mugabe dead at 95
Former Zimbabwe longtime leader, Robert Mugabe died Thursday night in a clinic in Singapore where he was receiving treatment.
Mugabe, who died aged 95, ruled Zimbabwe for close to four decades�before being ousted in a military takeover�in November 2017.�
Though initially admired as a hero of Africa�s independence struggle, his long rule descended into tyranny, corruption and incompetence, earning him international pariah status. His death prompted mixed reactions in�Zimbabwe, across Africa and around the world.
The rivalry was resolved when Mnangagwa, a Zanu-PF stalwart, took power when Mugabe reluctantly resigned after a military takeover. The news of his decision�prompted widespread rejoicing.
Previous articleLuxury shopping booming in Kenya despite tough economic times
Next articleBasketball Africa League unveils new logo